Madaxweyne Xasan “Howlgalada socda waxey fursad u siinayaan shacabka inay aayahooda ka tashadaan.” « AYAAMO TV
452 Views Date March 10th, 2014 time 8:30 am
Madaxweynha Jamhuuriyadda Federaalka‪#‎Somalia‬ Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa maanta kulan la qaatay qaar ka mid ah Guddoomiyeyaasha Gobolada Dalka. Waxaana goob joog ahaa Wasiirka Arrimaha Gudaha iyo Federaalka Mudane Cabdullahi Godax Barre iyo mas’uuiliyiin ka socotay Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka.
Guddoomiyeyaasha Gobollada waxaa ka mid ahaa Guddoomiyaha Galgadud Hussein Cali Weheliye (Cirfo), Guddoomiyaha Bay Cabdi Adam Hoosow, Guddoomiyaha Jowhar Cadi Jiinow Calasow, Guddoomiyaha Banadir Xasan Maxamed Xuseen Mungab, Guddoomiyaha Shabeelaha Hoose Cabdulqadir Maxamed Nur (Siidii)
“Qorsheyaasha dowladda ayaa ah in dib u eegis lagu sameeyo dastuurka, la dhaqangeliyo nidaamka Federaalka iyo in dalka laga hirgaliyo nidaamka dimoqraadiyada oo dadka deegaanka ay aayahooda ka tashadaan. Si taas loo gaaro waa in maamulada Gobolada iyo Degmooyinka ay noqdaan kuwo u adeega bulshada, la yimaada maamul wanaag. Sidoo kale goobaha laga saaro kooxaha nabad-diidka ah waa in si deg deg ah loogu gurmadaa shacabka oo loo helaa gar-gaar baini aadanimo iyo in loo helo adeegyada aasaasiga ah, si dadku u dareemaan faa’iidada dowladnimo iyo horumar.”- DHAMAAD –